YuIP.org - Bona IP yakho zikarhulumente-IP yakho eyimfihlo Online.
YuIP.org Sebenzisa indawo YuIP ukufumanisa IP yakho, ukukhangela kumazibuko evulekileyo, nayo ukuvavanya engenamnini ukuya iiseva ezininzi ehlabathini aze anike umyalelo ping online.
Bonisa IP yakho
IP Yakho kwi-Internet
IP Local Network wakho
IP Yakho kwi-Internet, ndiza wayebhekisela kwidilesi yakho ye-IP kawonke, ithetha ukuba idilesi ye IP, ukuba zonke website ufikelele ungakwazi ukubuka it. Ukuba usebenzisa iseva onegunya IP kawonke ukutshatisa abaphulaphuli bakho IP yomncedisi womntu onegunya.
IP yakho kwi LAN, oku kuyafana ne dilesi yakho IP labucala. Le IP ifumaneka kuphela izixhobo ukuba ezidibene kwinethiwekhi yakho yobulali. Ukujonga idilesi yakho ye-IP kwi ukufikelela LAN le sayithi Kuyathethelelwa usebenzisa ibrawuza Chrome okanye browser Firefox kuba asinguye wonke umntu uyakwazi ukubona oko.
Idluliselwe IP elivumelana kwidilesi IP ukuba bunenjongo ukuchonga isixhobo ukufikelela site-intanethi ngokusebenzisa lomncedisi womntu onegunya le HTTP. Kusenokwenzeka ukuba umncedisi wakho proxy ukubanesimo ukubonisa IP yakho edluliselwe. Ingaba kukho ezinye iimeko edluliselwe IP azisebenzisayo umthwalo elungeleleneyo.
ISP yakho, le intsimi zama ukuchonga nkampani yoqhagamshelo yakho intanethi.
Umyinge kokulinganisa, ndithetha kuthathe ixesha elingakanani ukuze intanethi yakho ithumele ize ifumane umyalelo oluncinane iwebhusayithi. Oku kwenzeka ngalo lonke ixesha kwaye kwakhona xa ufikelela website. Ngoko ke elifutshane ixesha, ngokukhawuleza ukuthumela nokufumana inkqubo comandos.O uya kuzama ukwenza uvavanyo kokulinganisa internet yakho usebenzisa iseva elikufutshane AWS unako.